कोरोना भाइरसले सृजित समस्या र स्थानीय तहको भूमिका - Jhulkegham
कोरोना भाइरसले सृजित समस्या र स्थानीय तहको भूमिका
झापा । यतिबेला विश्व आक्रान्त बनेको छ, स्वास्थ्य नै धन हो १६५ मुलुकमा फैलिएको कोरोना भाइरसले मानिसलाई उक्त वाक्यले सचेत पनि बनाउन थालेको छ । स्वास्थ्य मानिसको जीवनको अर्थपूर्ण पाटो हो । विश्व अर्थतन्त्रमा भयावय स्थित सृजना भएको छ । आक्रान्त बनेका मुलुकहरु आत्मनिर्भर र प्रविधीमैत्री हँदा हुँदै पनि विकारल अवस्थालाई साम्य पार्न धौ धौ परिरहेको छ ।
जुन देशले आफूलाई चाहिने नुनदेखि सुनसम्म उत्पादन गरिरहेका थिए । नेपाल जस्तो विकास उन्मुख र भूपरिवेष्ठीत मुलुकका लागि ठूलो चुनौती रहेको छ । राजनीतिक रुपमाआएको परिवर्तन पछि भर्खर मात्र बिकासमा बामे सार्दै गरेको मुलुक यो भाइरसले एउटा तरंग सृजना गरेको छ ।
मानौं दैवको लिला अपरम्पार छ सगरमाथा जस्तै अटल छ, तत्काल महामारीको प्रकोप नेपाल आई पुगेको छैन । समस्याग्रस्त अवस्थामा विश्व एकैसाथ बिरामी परेको छ । चहलपहल तथा विकास निर्माणका कामहरु तिव्र गतिमा भइरहँदा एकाएक सन्नटा छाउन थालेको छ । अत्याधिक भिडभाडका कारणले गर्दा यात्रामा असहजता उत्पन्न हुने क्षेत्रहरु पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको त्रासका कारणले सुनसान जस्तो हुन थालेको छन् ।
व्यापार व्यवसाय, शिक्षा, रोजगारी लगायतका लागि टाढा-टाढाबाट आउने स्थानमा मानिसहरुको आवतजावतमा पनि कमी आउन थालेको छ । बालबालिका देखि वृद्धवृद्धासम्मको मन मस्तिष्कमा कोरोना भाइरस गुञ्जिन थालेका कारणले विश्वका सम्पूर्ण मानिसहरुलाई त्रासपूर्ण जीवन जिउन बाध्य बनाएको छ ।
चिया पसल, अस्पताल, हाट बजार लगायतका क्षेत्रमा पनि कोरोना कै मात्र गफ हुन थालेका छन् । चीनबाट सुरु भएका यो डर लाग्दो भाइरसले १६५ मुलुकमा फैलिनुका साथसाथै ७ हजार भन्दा बढी मानिसहरुको ज्यान समेत लिएको विश्व स्वास्थ्य संघले जनाएको छ । जसका कारणले गर्दा मानिसहरु घर भन्दा बाहिर नजाने अवस्था सृजना हुन थालेको छ ।
उच्च पदवलाहरु जसोतसो जीवन जिउन सक्लान् तर दिउँसो ज्यालादारी वा व्यवसाय गरेर जीवन काट्न बाध्य हुने जो कोहिलाई भने यसले पक्कै समस्या नहोला भनेर दुई मत नै छैन । सरकारले कोरोना प्रभावित राष्ट्रका मानिसहरूलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथसाथै विद्यालय तथा कलेजहरु समेत बन्द गरेको अवस्था छ जसका कारणले गर्दा विद्यार्थीहरुको पढाइमा असर पुगेको छ ।
आज बिहीबार बाट तय भएको एस.ई. ई. पनि स्थागित भएको छ त्यति मात्र होइन परिक्षा हुँदै गरेका विद्यालयका परिक्षा पनि सरकारको निर्देशन पालना गर्दै अर्को सूचना नआएसम्मका लागि रोकिएका छन् । यी विभिन्न समस्याहरु थाहा हुँदा हुदैपनी पनि पैसाको लोभले गर्दा व्यापारीहरु व्यापारमा कालोबजारी गर्न थालेका छन् ,जसका कारणले जनतालाई सास्ती खेप्नु पर्ने अवस्था आउन थालेको छ ।
सरकारले मास्क लगाएर मात्र बस्ने वा यात्रा गर्ने भनि रहँदा पसलमा पुग्दा सटेज छ भनेर ढाँटने र हुँदा पनि बढी मूल्यमा बेच्ने गरेका छन् । प्रहरीले मास्कमा कालोबजारी गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर कार्वाही गरे पनि अजै पनि कालोबजारीमा कमी आएको छैन । कोरोना भाइरस कारणका कारण विदेशी मुलुकसँग निर्भर रहेको नेपालमा संकटकाल सृजना हुन्न भन्न सकिँदैन ।
भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएका धेरै नाकामा कडा सुरक्षा अपनाउन थालिएको छ । विभिन्न समय नेपालमा भएका नाकाबन्दीका कारणले गर्दा नेपाली समाजमा देखा परेको नाकाबन्दीको समस्या कोरोनाका कारणले गर्दा दोहोरिने हो कि भन्ने डर आमजनतामा आइ पर्न थालेको छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमणबाट बच्न विभिन्न कदमहरु चालि रहेको अवस्थामा स्थानीय सरकार भने मौन जस्ते देखिन्छ । स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थामा त्यति चासो नदिएको हो कि भन्ने प्रश्न कता-कता उठन् थालेका छन् ।
यति भनिरहँदा कामै नगरेको भन्ने चाहीँ होइन प्रयासरहत रहेपनि गाउँघरमा कोरोनाका बारेमा मानिसलाई सचेत बनाउने किसिमका कार्यक्रमहरु हुन सकेका छैन । सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक सूचना फैलाएर आम जनतामा त्रास सृजना गर्ने कार्यहरु भइरहेको छन् , त्यसैले सरकारले गलत सूचना प्रवाह गर्ने जो कोहीलाई पनि कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्नु जरुरी छ ।
मेचीनगरमा ३० परिवारलाई खाध्यान्न वितरण